Nanamontsana ny zava-bita tsara indrindra i Kami Rita Sherpa raha nahanika ny Tendrombohitra Everest in-24 · Global Voices teny Malagasy
Nanamontsana indray zava-bitany tsara indrindra tamin'ny fianihany ny tampon-tendrombohitra Everest
Voadika ny 23 Mey 2019 6:07 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, नेपाली, Español, বাংলা, 日本語, English
Mitana ny zava-bita tsara indrindra amin'ny fianihana ny Everest in-24, ny tsara indrindra nataon'olona i Kami Rita Sherpa. Sary avy amin'ny pejy Facebook Seven Summit Treks Pvt. Nahazoana alalana.
Ao anatin'ny lisitry ny fanirian'ny adrenalinan'ny mpankafy rehetra ny fianihana ny Tendrombohitra Everest, saingy nanamarina izany tao amin'ny lisitra nataony imbetsaka kosa ilay mpianika ny fara-tampon'i Everest Kami Rita Sherpa. Raha nifanamby tamin'ny mety ho zava-bitany rehetra izy dia nahanika ny faratampony avo indrindra erantany indroa tao anatin'ny herinandro tamin'ity taona ity – vao haingana tamin'ny 15 May sy tamin'ny 21 May 2019 indray – izay nahatonga ny isan'ny fiakarana an'i Everest ho 24.
Nanao izany indray i Kami Rita Sherpa. Nandresy ny zava-bitany tsara indrindra tamin'ny ankamaroan'ny fianihana ny tampon-tendrombohitra Everest izy. Nihanika ny tendrombohitra avo indrindra erantany indroa tao anatin'ny herinandro i Sherpa, 49 taona- in-24 ny fitambarany. Ora: 6:38 maraina. Arahabaina !!
Nambaran'ny Seven Summit Treks (Fianihana ny Tampony Fito) , ilay orinasa izay miara-miasa aminy tao amin'ny Facebook hoe:
Ny fiakaran'i Kami Rita Sherpa ny Tendrombohitra Everest faha 24, 8.848 metatra, FIARAHABANA GOAVANA HO AN'ILAY ZOKIOLONA MPITARI-DIA.
Tamin'ity maraina ity tamin'ny 6:30, niakatra ny Tendrombohitra Everest fan-24 i Kami Rita (Fiakarana faharoa tamin'ity andiany ity) ary nanamontsana ny zava-bitany tsara indrindra tamin'ny fiakarana faha-23 ! […]
Araka an'i Tashi Lakpa Sherpa, mpitsabo ao amin'ny Seven Summit Treks, tamin'ity maraina ity tamin'ny 6:30, nianika ny tampony avo indrindra tamin'ny alàlan'ny ilany Atsimo niaraka tamin'ny EKIPAN'NY POLISY INDIANINA i Kami Rita . “Fan-24 i Kami Rita Sherpa no niakatra ny Tendrombohitra Everest raha nitarika ny ekipan'ny Polisy Indiana ho any amin'ny Tendrombohitra Everest 2019 androany maraina; nampirehareha ny firenena iray manontolo izy, marika volamena eo amin'ny tantaran'ny fianihana tendrombohitra izany ??”hoy i Sherpa nanohy.
Ianao: nandeha nikotrana indroa aho tamin'ity herinandro ity.
Arahabaina Kami Rita Sherpa noho ny fiakarana nahomby faha 24 ny Tendrombohitra Everest, anisan'izany ny fiakarana indroa tao anatin'ny 7 andro avy aty amin'ny ankolafin'ny Nepal!
Anisan'ny vondrom-poko Sherpa izay teratany any amin'ny faritra be tendrombohitra indrindra any Nepal sy any Himalayas i Kami Rita. Maro ireo Sherpas no mahay mianika tendrombohitra sady manam-pahaizana any amin'ny faritra misy azy ireo ary efa ela izy ireo no mpitari-dalana matihanina ho an'ireo mpianika tendrombohitra vahiny izay maniry ny hiatrika ny fara-tampony.
Avy any amin'ny tanànakely Thame ao amin'ny Distrikan'i Solukhumbu ao Nepal no fiavian'i Kami Rita, fantatra amin'ny fananany mpianika malaza. Ahitana mpianika malaza ao Thame , toa an-dry Apa Sherpa (na Super Sherpa) izay nitana ny zava-bita tsara indrindra teo aloha tamin'ny ankamaroan'ireo fihaniana ny Tampon'i Everest sy Ang Rita Sherpa izay niakatra ny Everest in-10 tsy nisy oksizenina fanampiny ka nahazoany ny anaram-bositra hoe ‘Ny Leopardan'ny Orampanala’.
Niakatra voalohany an'i Everest i Kami Rita tamin'ny 13 Mey 1994 ary nihanika ny K2 sy Lhotse indray mandeha avy, Manaslu indroa ary Cho Oyu im-balo, izay mitotaly fiakarana ny tendrony miisa 36 tamin'ny 8.000m araka ny voalazan'ny Seven Summit Treks.
Vakio teny malagasy: In-22 izay no nahanika ny tendrombohitra Everest i Kami Rita avy ao Nepal, zava-bita tsara indrindra izany
Taorian'ny fiakarana an'i Everest imbetsaka, nahita mibaribary ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro any Everest i Kami Rita. Hoy i Kami Rita raha niresaka tamin'ny BBC Nepali tamin'ny fiandohan'ity taona ity :
Tany am-piandohana dia mila niakatra tohatra miisa 12-13 izahay [ao amin'ny hantsan-dranomandry Kumbu] saingy vitanay amin'ny 3 na 4 monja izany amin'izao fotoana . […]
Teo aloha, nahitana orampanala betsaka ny faritra faharoa. Ankehitriny, tsy misy afatsy vaingan-dranomandry no hita eo. […] Nisy orampanala hatreny andohalika teo ambonin'ny riam-bato, ankehitriny vato sisa no hitanao eo.
Mpianika manodidina ny 300 no maty tany Everest ary razana vitsy no tafaverina tety ambany. Ankehitriny, nampiseho ireo razana tototry ny orampanala ny fitsoniky ny ranomandry any Everest.
Nilaza ny tatitra iray vao haingana avy amin'ny Foibe Iraisampirenena ho an'ny Fikarakarana ny Tendrombohitra fa ho very ny ampahatelo mahery amin'ny ranomandry ao Himalayas any amin'ny faran'ny taonjato. Ankoatra izany, maro ireo mpianika tendrombohitra no mamela ny tranolay, ny fitaovana fianihana, ny tavoahangin'etona ary ny maloton'olombelona, ​​ka mahatonga an'i Everest ho toerana fanariam-pako ara-bakiteny. Na izany aza, raharaha goavana ny fianihana an'i Everest miaraka amin'ireo maniry ny hiakatra eny an-jatony izay mitady ny fanampian'ny mpitari-dia Sherpa mba hahatongavana eny amin'ny tampony.
Tahaka ny isan-taona dia efa nisy ny zava-bita tsara indrindra vaovao niaraka tamin'i Saray N’ Kusi Khumalo avy ao Afrika atsimo izay lasa vehivavy Afrikana voalohany nahavita niakatra an'i Everest. Ary efa nisy ihany koa ny mpianika sasany maty sy tsy hita popoka tany amin'ny Tendrombohitra Everest tamin'ity taona ity. Saingy, toa hita fa tsy hitsahatra mihitsy ny firohotana ho any amin'ny fianihana an'i Everest.